Igama lihlotshaniswa ezingqondweni hhayi ngengubo yokulala efudumele noma muzhik obukhulu. Syech Nike kanye nezinye brand ezemidlalo abadumile umzuzile emakethe ngokushesha futhi kalula, ngenxa yezakhiwo zezinga elihle kanye nentengo zilingana ne elithi "imfashini". Futhi amadoda maningi noma ukweluleka, iwukuba kube ukunyakaza khulula. Izingubo yalolu hlobo akuyona into weqhwa ukudlala kule mpi, ungaya.
Ngakho-ke Syech Mens Nike fly ezitolo inthanethi kanye prototypes yabo yangempela ngokushesha weqhwa efanayo. izinzuzo Okuphawulekayo: kalula wokugeza, kulula ukugqoka nokukhanya umbala, futhi mhlawumbe conservatism esiqinile - umehluko oyinhloko phakathi umkhiqizo omuhle.
Kungakanani futhi kabani?
Lapho ekhetha ibhantshi, kufanele ngokushesha ukusetha umkhawulo kubha ngezansi lapho kwentengo yomkhiqizo izinga akufanele ivinjelwe. Noma kunjalo, lokhu ubuhle ngezinto zemvelo - phansi sinteponovye jacket Sekuyisikhathi eside fed up nge air impermeability. Syech Nike kakhulu izinga ithungwe ku ezingaphansi losendzaweni eCanada noma-United States, okungenani eTaiwan. Lezi jackets musa abakhiqizi ukuhlala bagcwalise omisiwe wavuthwa futhi eider phansi, futhi ine elikhulu ezishisayo ukwahlukanisa properties ukudlula umoya.
Asinakusho ukuthi izitshalo European ukuhlala ku imoto enjalo, kodwa moguls zemidlalo asisebenzi Europe. Nokho, le nkulumo "Made in China" - uyinto lalivamile, futhi akunakwenzeka abayohlanganiswa umshado. jackets Chinese , futhi, zihlukile. Into eyinhloko touch ukuze sithole ukuthi igcwele ulwelwesi nombala, ngeke uye khona ukuphuma kuso fluff.
Ekugcineni, izindleko. Ukuze uthole okuhle engasindi Nike jacket ne waterproof izindikimba nokungeza isixazululo design, ulungele ukukhokha kusuka 300 kuya 700 zamaRandi. Abanye onobuhle angathengwa kalula ngentengo mnene, uma kungekhona siyakhubeka scary ku izinga abampofu inkohliso.
Kuyathakazelisa (kodwa neze abaningi bahlala ezindlini ezinjani efanayo) ukuthi ikhophi yokuqala Nike Syech kumele abe Ithungelwe isikhwama yamathebhu isampula. Thanda, hhayi ingulube in a inzuzo chokoloza, futhi dada! By the way, ngaphezu yamathebhu, kunengqondo ukuhlola ezinye izingxenye zokuqala - izithonjana nekubhala umbhalo «Nike». Futhi yini izibonelo aziwa ngayo, uma izwi wakwazi ukubhala amaphutha ezintathu ...
Sicela uqaphele pad: kumele kube izinga okusezingeni Ithungelwe, engasindi futhi babe izakhiwo antistatic. jackets amadoda esiwuhogelayo sika Nike kufanele izimbotshana nge zip emakhwapheni ukukhulisa air kwegazi. Ngokuvamile, ungase ukhiphe futhi kwenzakalani. Lokhu okungukuthi ikakhulukazi ewusizo kwezimo abasebenza ngaphansi kwazo njalo ushintsho kwezulu umbuso. Cabanga umkhiqizo wonkana akufanele kube ngaphezu iphawundi.
Ekugcineni, ngo-a onobuhle ucishe ethandwa. Ikakhulukazi esisebenzayo ubhekwa 800 Gcwalisa - zakudala jacket black ne yokuma-up collar. Liyabonakala Stitch evundla obuphelele iDemo wenze ukufunwa lo mkhiqizo ezikhulayo exponentially. Ngesisekelo mncintiswano, ngakho ukukhuluma ngaphakathi eqenjini lezimpahla, ke ukwenza Choreman futhi touchdown. Imodeli lokuqala kuyaziwa umbala okhakhi has a hood detachable futhi a collar okusezingeni eliphezulu. Esesibili - inhlanganisela yokuqala phansi nezimpaphe endaweni Ingxenye 4: 1, akhiqizwa imibala ngokucace nakakhulu, ngokuvamile ngemibala emibili.
Indlela ukupheka imifino sauteed: ezinye izindlela best